फागुन २०, काठमाडाैं ।
नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीचको ३ बुँदे सहमतिसँगै २८ फागुन ०७५ मा सो समूहलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति भएको छ । सहमती अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय, मुद्दा खारेजी र बन्दीको रिहाइको निर्णय गरेकाे छ ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि २ हजार ९८ जना विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे थियो । तीमध्ये, अहिले १ सय २६ नेता जेलमा र १८ जना प्रहरीको हिरासतमा थुनिएका छन् । उनीहरुलाई सरकारले प्रक्रिया पुरा गरेर रिहा गर्ने तयारी गरेको छ ।
रिहाइ गर्ने प्रकृया कस्ताे हुन्छ
फौजदारी कार्यविधि संहिता–०७४ अनुसार राजनीतिक मुद्दा मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । गृह–मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विप्लवका नेता–कार्यकर्ता रहेका सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारको निर्णय सहित निवेदन दिनुपर्छ । सो निवेदन उपर न्यायाधीशले सुनुवाई गरेर राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको निर्णय सदरको आदेश गरेपछि मात्रै विप्लवका नेता–कार्यकर्ता रिहा हुन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अदालत पठाउनुपर्ने र अदालतले स्वीकृति दिएपछि मुद्दा फिर्ता हुने वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी बताउँछन्। विगतदेखि नै राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्दै आएका भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले चाहेमा राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।’
सर्वोच्च अदालतले डिबी लामाको मुद्दामा ‘राजनीतिक मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने’ फैसला गरेको थियो । सो नजिरका आधारमा पनि विप्लव समूहको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने बताउँछन् अधिवक्ता भण्डारी । डिबी लामाको मुद्दामा सर्वोच्चले थप व्याख्या गर्दै कूटनितिसँग सम्बन्धित मुद्दा र धार्मिक दंगा फैलन सक्ने मुद्धा फिर्ता लिन सकिने फैसला गरेको थियो ।
हिरासत र कारागारमा विप्लवका ठुला नेता काेकाे छन् ?
विप्लव नेकपाका तेस्रो वरियताका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा छन् । स्थायी समिती सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली नख्खु कारागारमा छन् ।
विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’ पनि चितवन जेलमा छन् । उनि केन्द्रीय सदस्य हुन् । त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य माइला लामा संखुवासभा जेलमा छन् । माइला जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष पनि हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य चुडामणी ओली बाजुरा जेलमा छन् । केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुन कैलाली जेलमा छन् । केन्द्रीय सदस्य भरत बम बर्दिया जेलमा छन् । अर्का नेता भेषराज भुसाल इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासतमा छन् ।
काठमाडौंमा एमाले नेपाल समूहले बनायो समानान्तर कमिटी
बालुवाटारमा ओली र विप्लवबीच भेटवार्ता, के भयाे कुराकानी ?
ओलीसँगको बैठकमा माधव नेपाल पक्षले राख्याे यस्ताे अडान
एमाले विवाद : ओली-नेपाल समूहकाे वार्ता सकियो
एमाले पार्टी कार्यालयमा एउटै हैसियतकाे कुर्सीमा ओली र नेपाल
माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीकाे चुनौती